Deetaa dhangii faayilii dBASE tiin (fufaa faayilii*.dbf ) LibreOffice Base ykn wardii keessatti banuu fi olkaa'uu dandeessa. LibreOffice Base keessatti, kuusaan deetaa dBASE ukaankaa kan faayiloota fufaa faayilii .dbf qaban qabatu dha. Tokkoon tokkoo faayilii gabatee kuusaa deetaa keessaa gita. Foormulaawwanii fi Dhangeessuun yeroo faayilii dBASE LibreOffice irraa bantee olkeessu ni badu.
Faayilii dBASE gara Gabatee Kuusaa deetaatti alaaguu
Faayilii *.dbf kan alaaguu barbaaddu agarsiisi.
Qaaqni Faayiloota dBASE alaagi ni banama.
Faayiliin dBASE akka wardii Calc haaraatti banama.
Yoo wardii akka faayilii dBASE tti olkaa'uu barbaadde, faayilii alaage keessaa tarree jalqabaa hin jijjiirin ykn hin balleessin. Tarreen kun odeeffannoo kuusaa deetaatiin barbaadamu qabata.
Faayilii dBASE gara Gabatee Kuusaa deetaatti alaaguuf
Gabateen kuusaa deetaa LibreOffice Base geessituu gara kuusaa deetaa dura jiruu ti.
Faayilii - Haaraa- Kuusaa Deetaa.
Sanduuqa Maqaa faayilii qaaqa Akkasitti olkaa'i keessatti, kuusaa deetaaf maqaa galchi.
SanduuqaGosa kuusaa deetaa qaaqa Amaloota Kuusaa deetaa keessatti, "dBASE" filadhu.
Galeeloo faayilii dBASE qabatu agarsiitii, TOLE cuqaasi.
Wardii gara faayilii dBASE alerguuf
Sanduuqa Dhangii faayilii keessatti," faayilii dBASE" filadhu.
Sanduuqa Maqaa faayilii keessatti," maqaa faayilii dBASE" barreessi.
Deetaa wardii ammee irraa qofatu alergama.
Title is: Faayiloota dBASE Alaaguu fi Alerguu